Ny tatitra Belmont dia milaza fa ny fitsipiky ny tombom-barotra dia adidin'ny mpikaroka amin'ny mpandray anjara, ary ny roa dia: 1) tsy manisy ratsy ary (2) mampitombo ny tombontsoa azo atao ary manamaivana ny loza mety hitranga. Ny tatitra Belmont dia manasongadina ny hevitra hoe "aza manisy ratsy" ny fomba amam-panao Hippocrate amin'ny etika ara-pahasalamana, ary azo aseho amin'ny endrika matanjaka izay "tsy tokony hanimba olona iray na inona na inona tombontsoa mety ho azon'ireo mpikaroka" (Belmont Report 1979) . Na izany aza, ny tatitra Belmont koa dia manaiky fa ny fianarana zavatra mahasoa dia mety hampidirana ny olona sasany mety hampidi-doza. Noho izany, ny tsy ilana ny tsy fanaovana ratsy dia mety mifanohitra amin'ny tsy maintsy ianaran-javatra, ka mahatonga ireo mpikaroka hanapa-kevitra indraindray handray fanapahan-kevitra sarotra momba "raha azo atao ny mividy tombony sasany na dia misy aza ny loza mety hitranga, loza " (Belmont Report 1979) .
Amin'ny fampiharana, ny fitsipiky ny tombontsoa dia noraisina dia midika fa ny mpikaroka dia tokony handinika fizarana roa samihafa: fisafoana / tombontsoa avy amin'ny fanadihadiana ary avy eo fanapahan-kevitra momba ny mety hitrangan'ny loza sy ny tombontsoa azo amin'ny fifandanjana ara-moraly. Ity dingana voalohany ity dia zavatra manan-danja ara-teknika izay mitaky fahaiza-manaony, raha ny faharoa kosa dia zava-dehibe amin'ny toe-tsaina ety ivelany izay mety tsy dia manan-danja loatra ny fahaiza-manaony, na koa manimba.
Ny fikarohana / tombontsoa azo avy amin'ny tombontsoa dia midika ho fahombiazana sy fanatsarana ny risika sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fianarana. Ny fanadihadiana ny risika dia tokony ahitana singa roa: ny mety hitranga amin'ny fisehoan-javatra ratsy sy ny fahavitrihan'ireo hetsika ireo. Noho ny fandalinana fikarohana / tombontsoa, ​​ny mpikaroka iray dia afaka manitsy ny fandaharam-pianarana mba hampihenana ny mety hitrangan'ny hetsika tsy mifanaraka (ohatra, mivoaha ireo mpandray anjara izay mora voapoizina) na mampihena ny henjan'ny hetsika tsy mety raha misy izany (ohatra torohevitra azo raisina ho an'ny mpandray anjara izay mangataka izany). Ankoatr'izay, mandritra ny fikarohana / tomban'ezaka, ny mpikaroka dia mila mitadidy ny fiantraikan'ny asa ataony tsy amin'ny mpandray anjara, fa amin'ny tsy fisian'ny fandraisana anjara sy ny rafitra sosialy. Diniho, ohatra, ny fanandraman'i Restivo sy van de Rijt (2012) momba ny vokatra azon'ireo mpandrindra Wikipedia (resahina ao amin'ny toko 4). Tao anatin'ity fanandramana ity, nanome mpitsoa-ponenana maromaro ireo mpikaroka izay heveriny fa mendrika ary avy eo dia nanara-maso ny fandraisany anjara ho an'ny Wikipedia raha oharina amin'ny vondrona mpiandraikitra manana lisansa mendrika izay tsy nanome loka ireo mpikaroka. Alaivo sary an-tsaina, raha, raha manome baoty maromaro kely, Restivo sy van de Rijt dia nandona Wikipedia tamin'ny maro, loka maro. Na dia mety tsy manimba ny mpandray anjara tsirairay aza izany fikandrana izany, dia mety hanelingelina ny tontolo voajanahary manontolo amin'ny Wikipedia izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tokony hieritreritra momba ny fiantraikan'ny asa ataonao ianao tsy amin'ny mpandray anjara fotsiny, fa amin'ny ankamaroan'izao tontolo izao.
Aorian'izany, raha vao mihena ny risika ary ny tombontsoa azo atao, ny mpikaroka dia tokony hanombana raha toa ka mitombo ny fandanjana. Tsy mampirisika ny famintinana tsotra izao ny vola sy ny tombontsoa. Ny zava-tsarotra sasany dia mahatonga ny fikarohana tsy azo avela na inona na inona ny tombontsoa (ohatra, ny Fianarana ny Syphilis Tuskegee voafaritra ao amin'ny appendice ara-tantara). Tsy toy ny fanadihadiana ny tombotsoa azo avy amin'ny loza / tombontsoa, ​​izay tena teknika, ity dingana faharoa ity dia tena ara-pihetseham-po ary mety hampanan-karena azy ireo olona izay tsy manana fahaizana manokana momba ny foto-kevitra. Raha ny tena izy, satria matetika ny vahiny no mahamarika zavatra samihafa avy amin'ny mpitsoka, ny IRBs any Etazonia dia mitaky ny fanasokajiana ny tsy fandrefesana iray. Amin'ny traikefa azoko atolotra amin'ny IRB, afaka manampy ireo vahiny ireo mba hisorohana ny fiheveran'ny vondrona. Noho izany raha toa ianao ka sahirana amin'ny fanapahan-kevitra raha toa ny tetikasam-pikarohana ataonao ka mitaky fanadihadiana mety amin'ny loza / tombontsoa dia tsy manontany fotsiny ireo mpiara-miasa aminao, manandramà manontany ny tsy mitady mpampianatra; Mety hahagaga anao ny valiny.
Ny fampiharana ny fitsipiky ny tombontsoa amin'ireo ohatra telo izay heverintsika dia manome soso-kevitra sasantsasany izay mety hanatsara ny fifandanjany / tombony. Ohatra, amin'ny fifandraisana ara-pihetseham-po, ny mpikaroka dia mety nanandrana ny hamoaka ny olona latsaky ny 18 taona sy ny olona izay mety ho tena manakiana mafy ny fitsaboana. Azony natao ihany koa ny nanandrana ny hampihenana ny isan'ny mpandray anjara amin'ny fampiasana fomba fampiasa amin'ny statistika mahomby (araka ny voalaza amin'ny antsipiriany ao amin'ny toko 4). Ankoatr'izay, mety ho nanandrana nanara-maso ireo mpandray anjara izy ireo ary nanolotra fanampiana ho an'izay rehetra nipoitra. Ao amin'ny Tastes, Bits, ary Time, ireo mpikaroka dia afaka nametraka fiarovana fanampiny rehefa nanafaka ny angon-drakitra (na dia nankatoavin'ny IRB Harvard aza ny fombany, izay maneho fa tsy mifanaraka amin'ny fanao mahazatra tamin'izany fotoana izany); Hanolotra soso-kevitra manokana momba ny famoahana angona aho rehefa milaza ny loza mety hitranga aho (fizarana 6.6.2). Farany, tao Encore, ireo mpikaroka dia mety nanandrana ny hampihenana ny isan'ireo fangatahana mety hiteraka izay natao mba hahatratrarana ny tanjon'ity tetikasa ity, ary mety ho nesoriny ny mpandray anjara izay tena atahorana ny governemanta mandainga. Ny tsirairay amin'ireo fanovana ireo dia mampiditra ny fividianana ireo tetik'asa ireo, ary ny tanjoko dia tsy tokony hanoro hevitra fa tokony nanao ireny fiovana ireny ireo mpikaroka ireo. Fa kosa, tokony hampiseho ny karazana fanovana izay afaka manome soso-kevitra ny fitsipiky ny tombom-barotra.
Farany, na dia efa nitombo be aza ny fahavoazana sy ny tombontsoa azo tamin'ny alàlan'ny dizitaly, dia mora kokoa amin'ny mpikaroka ny mampitombo ny tombontsoa amin'ny asany. Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana ampiasaina amin'ny vanim-potoana nomerika dia manamora ny fikarohana sy fisokajiana malalaka, izay ahitan'ny mpikaroka ny angon-drakitra fikarohana sy code ho an'ireo mpikaroka hafa ary manome ny taratasin'izy ireo amin'ny alàlan'ny famoahana malalaka. Izany fiovana izany dia ny fikarohana sy fanadihadiana, raha tsy hoe tsotra fotsiny, dia manolotra fomba iray ho an'ny mpikaroka mba hampitombo ny tombontsoa amin'ny fikarohana ataony raha tsy mampiseho ireo mpandray anjara amin'ny loza mety hitranga hafa (ny fizarana data dia singa iray izay horesahina amin'ny antsipiriany ao amin'ny fizarana 6.6.2 amin'ny risika amin'ny informatika).